Robin Van Persie Oo Dib Ugu Laabanaya Tababarka Kooxdiisa Kadib Fasax Dheeri Ah Oo Kooxda Ay Siisay. 2012-07-17 08:22:09
Robin van Persie oo dib ugu laabanaya Tababarka kooxdiisa kadib fasax dheeri ah oo kooxda ay siisay.
Ciyaaryahanka kooxda Arsenal Robin van Persie ayaa dib ugu soo laabanaya tababarka kooxdiisa kadib fasax dheeri oo ciyaaryaahnka la siiyay.
Robin van Persie ayaa soo xaadiraya tababarka Naadiga Arsenal isagoo niyaddiisa la sheegay inaysan ahayn kooxda Arsenal isla markaasna raba in ay kooxda Fasaxdo.
Kabtanka ayaa maalinta ugu horeysa ee uu kooxda kusoo laabto uu marayaa tijaabada Caafimad ee sida caadiyan la marsiiyo marka xidig fasax sidaan oo kale uu ku maqnaado la marsiiyo.
“waxa rabaa inaan ka tago kooxda ayuu yiri Robin van Persie 4-tii bishan July waana hadalkii ugu naxdinta Badnaa oo ay maqlaan Arsen Wenger iyo taageerayasha kooxda Arsenal isagoo af buuxda ku dalbaday in laga iibiyo kooxo kale.
Waxaa fool ka fool ama waji ka waji kulmaya labo qof oo aad isugu wanaagsana labo bil ka hor wana Robin van Persie iyo Arsen Wenger oo la sheegay inay ahaayeen saaxiibo dhow laakin Robin van Persie uu ka baxay isla markaasna si cad u qeexay rabitaankiisa ah inuu ka tagaayo koooxda.
Hishiiska qandaraaska Robin van Persie uu kula jiro kooxda Arsenal ayaa waxa ka harsan wax ka yar 12 bilood isla markasna diiday inuu hishiis dheeri ah saxiixo.
Arsenal ayaa Hanjabaado Maaliyadeeed kala kulmayso kooxo ay kamid tahay kooxda horyaalka Ingiriska ee Man City oo si weyn ciyaryahan Robin van Persie u doonayso aaminsana inay ku adkaan karto qorshe kasto oo lacageed oo ku aadan Robin van Persie.
Tababare Arsen Wenger wuxuu doonayaa in Robin van Persie uu saxiixo hishiis kordhin uu kooxda kula sii joogayo laakin waa hadal aan ka daa dagi doonin Robin van Persie oo u muuqda mid wata Kacaan dabeeleed wuxuuna horey u sheegay bishi September ee sanadkii hore inuusan kordhin doonin hishiiska Arsenal kula joogo marnaba.
Arsenal ayaa u duulayso magaalooyinka Kula Lumpur sabtida soo aadan waaana safar ciyaareed ay ku mari doonto dalalka Malaysia,China iyo Hong Kong,waxana kooxda Arsenal ay la ciyaari dooontaa kooxda Man city oo ay kula ciyaari doonto garonka Buul SHimbireedka ee magaalada Beijing.
Cesc Febrigas,Samir Nasr ayay kooxda Arsenal lumisay sanadkii hore waxayna ahaayen labo xidig oo rabay inay ka tagaan kooxda waana hanaanka haatan uu maraayo Robin van Persie ee ah inuu rabo ka tagista Arsenal.	Latest News